Tag: fizotry ny varotra | Martech Zone
Tag: fizotry ny marketing
Matetika loatra, ny teknolojia dia lasa toetran'ny fahombiazana. Meloka tamin'io koa aho. Mora mividy ny teknolojia ary noho izany dia mahatsapa ho fanavaozana eo noho eo! Ny folo taona voalohany tamin'ny taona 2000 dia ny fidirana rehetra, noho izany dia nihazakazaka nankany amin'ny automatisation marketing tamin'ny tànana malalaka izahay, tao anaty vovoka kaomandy fividianana ary torolàlana azo antoka - nandeha niaraka tamin'ny sehatray vaovao izahay. Namely ireo blindera izahay rehefa tonga